0 Wednesday November 13, 2019 - 08:59:37
Ugu yaraan 10 qof Falasdiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo aan kala joogsi laheyn oo diyaaradaha dagaalka Yahuudda ay ka geysteen magaalada Qaza iyo hareeraheeda.
0 Sunday November 10, 2019 - 10:31:44
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda Maaliyadda dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in liiska waxa loogu yeero Argagaxisada lagu daray hoggaamiye sare uu katirsan Mujaahidiinta wadanka Maali.
0 Tuesday October 29, 2019 - 08:34:54
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in dibad baxyada rabshadaha wata ay wali kasii socdaan magaalooyinka ee wadankaasi waxaana jira khasaara lixaad leh oo ka dhashay dibad baxyadaasi.
0 Tuesday October 22, 2019 - 08:02:46
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in tobanaan kamid ah askarta iyo saraakiisha xukuumadda dabadhilifka Kaabuul ay dhinteen kadib weerar aad u xooggan oo dagaalyahanada Imaarada Islaamiga ah ay ku qaadeen saldhig melleteri.
0 Wednesday October 09, 2019 - 09:43:48
0 Sunday October 06, 2019 - 09:14:39
Waxaa sii xoogeystay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dibad baxyada rabshadaha wata ee ka socda wadanka Ciraaq.
0 Sunday October 06, 2019 - 09:13:13
Dowladda Sacuudiga ayaa qaadday tallaab kale oo qeyb ka ah mashruuca lagu calmaaniyaynayo dhulka Jazeeradda Carabta.
0 Sunday September 29, 2019 - 09:00:14
Mas'uul sare oo katirsan ciidanka dowladda Sacuudiga ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Jiddah ee ku teedsan xeebta badda Cas.
0 Sunday September 29, 2019 - 08:51:32
Maleeshiyaadka Kooxaha Xuuthiyiinta ee ka dagaallama wadanka Yemen ayaa qaaday weerarkii ugu xooganaa uguna khasaaraha badnaa ee abid ay lakulanto dowladda Sacuudiga.
Saciid Botafaliiqa iyo Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Al Jazaa'ir oo xukunno lagu riday.
0 Thursday September 26, 2019 - 08:53:47
Markii ugu horraysay mas'uuliyiin sarsare oo katirsanaa nidaamkii madaxweynihii hore ee Al Jazaa'ir ayaa lasoo taagay maxkamad melleteri waxaana loo heystaa dambiyo kala duwan.
0 Wednesday September 25, 2019 - 08:44:35
Ciidamada Mareykanka ee duullaanka ku jooga wadanka Afghanistan ayaa gummaad daran ugeystay dad shacab ah oo munaasabad aroos ku dhiganayay deegaan dhaca Koonfurta wadankaasi.
0 Saturday September 21, 2019 - 07:44:55
Waa arrin dhif iyo Naadir in beelo Soomaaliyeed ay maalin qura 600 oo neef geel ah diyo ukala qaataan, arrintan waxay ka dhacday gobolka Hiiraan oo intiisa badan lagu maamulo Shareecada Islaamka.
0 Saturday September 21, 2019 - 06:32:56
Markii ugu horraysay 8 sano kadib dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah nidaamka Cabdi Fataax Alsiisi ayaa gilgilay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadanka Masar.
0 Saturday September 21, 2019 - 06:26:33
Dowladda Sacuudiga ayaa wali la dhutinaysa khasaarihii dhanka maaliyadda ee kasoo gaaray weerarkii aadka u xooganaa ee isbuuc lasoo dhaafay lagu beegsaday laba kamid ah Keydadkeeda shidaalka.
0 Friday September 20, 2019 - 07:17:10
Waxaa magaalada Jiddah ee wadanka Sacuudiga ku dhintay Zeynul Caabidiin Bin Cali oo soo noqday madaxweynaha wadanka Tuunis ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika.
Shiinaha oo qarka usaaran in uu Mareykanka kala wareego hoggaaminta Caalamka [Video+Warbixin].
0 Thursday September 19, 2019 - 08:04:54
Warbixin oo uu soo saaray sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa ka digaysa awoodda dowladda Shiinaha ee sanadadan dambe sii xoogeysanaysay.
0 Tuesday September 17, 2019 - 07:14:55
Xarakada Jihaadiga Taliban ayaa sare uqaadday weerarada aan kala joogsiga laheyn ee ay ku hayso ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee duullaanka ku jooga wadanka Afghanistan.
Madaxweynaha Afghanistan oo isku day dil ka badbaaday kadib weerar lagu beegsaday.
0 Tuesday September 17, 2019 - 06:46:46
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in si dirqi ah uu weerar uga badbaaday madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Kaabuul.
0 Saturday September 14, 2019 - 06:52:27
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa markale duullaan ballaaran ku qaaday gudaha fog ee wadanka Sacuudiga halkaas oo ay ku yaallaan ceelal shidaal iyo xarumo muhiim u ah maamulka Aala Sacuud.
0 Thursday September 12, 2019 - 07:13:21
Markii ugu horraysay dowladda cusub ee ka hana qaadday wadanka Suudaan ayaa sheegtay in ay dalka dib ugusoo celinayso dadka aqaliyadda Yahuudda ee tobanaan sano ka hor wadanka laga eryay.
0 Wednesday August 07, 2019 - 07:09:01
Waxaa cirka iskusii shareeraya khilaafka u dhaxeeya dowladaha Pakistan iyo Hindiya ee ku saabsan gobolka Kashmiir ee ixtilaalka ku jira.
0 Saturday August 03, 2019 - 10:12:20
Mas'uul sare oo katirsan Xarakada Jihaadiga Taliban ayaa lagu dilay duqeyn dhanka Cirka ah oo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Marejkanka ay ka fuliyeen bartamaha wadanka Afghanistan.
0 Saturday July 20, 2019 - 08:11:24
Dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in liiska waxa loogu yeero argagaxisada ay ku dartay hoggaamiye sare oo katirsan jamaacada Jihaadiga ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ee ka dagaallanta wadanka Maali.
0 Saturday July 20, 2019 - 07:28:02
0 Saturday July 13, 2019 - 09:35:49
isbaheysiga Carabta ee dabadhilifka ah ayaa qarka usaaran in uu dhabarka isku jeediyo uuna joojiyo dagaalka uu ka wado wadanka Yemen kadib markii ay dowladda imaaraatka carabta ay aad udhintay ciidamadeeda Yemen ku duulay.
Dowladda Imaaraatka oo Xaqiijisay in ay Ciidamadeeda kala baxayso dalka Yemen.
0 Tuesday July 09, 2019 - 08:05:55
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda dabadhilifka Imaaraatka Carabta ayaa lagu xaqiijiyay in kumanaan kamid ah ciidamada dowladdaas ay isaga baxeen qaar kamid ah gobollada wadanka Yemen oo shan sano ka hor ay duullaan ku qaadeen.